Gen Bashiir Goobe oo la filayo in loo magacaabo Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliyeed. – Hornafrik Media Network
Gen Bashiir Goobe oo la filayo in loo magacaabo Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliyeed.
Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliyeed, Gen C/xakiin Saacid ayaa la filayaa in xil ka qaadis lagu sameeyo, Waxaana la qorshaynayaa in lagu badalo Gen Bashir Maxamad Jaamac (Bashiir Goobe) oo horay u soo noqday Taliye Ku Xigeenka Booliska Soomaaliyeed.
Warar hor dhac ah oo ay Hornafrik heshay ayaa sheegaya in Gen Saacid loo sababaynayo Xilka qaadistiisa Falalkii Amni Darro ee dhacay Bisha Ramadaan. Waxayna wararku intaasi ku darayaan in Khamiistii la soo dhaafay ay ahayd in Golaha Wasiiraddu ay Xilka ka qaadaan, Laakiin uu Madaxwayne Maxamad C/laahi Farmaajo dalbaday in lala sugo inta uu ka imaanayo.
Gen Saacid ayaa sidan oo kale 9 July 2014 waxaa Xilka Taliyaha Booliska ka qaaday Xukuumaddii uu hogaaminayay Raiisul Wasaare, C/wali. kadib markii isaga iyo Gen Bashiir Goobe oo waqtigaasi ahaa Taliyaha Nabadsugidda lagu eedeeyay inay wax ka qaban waayeen Amniga Magaaladda Muqdisho. Waxaana tallaabadan ay hadda mar kale qorshaynayaa inay Gen Saacid Golaha Wasiiradda kaga qaadaan sababo la xiriira inuu Amniga ku fashilmay ay mugdi galinaysaa Mustaqbalkiisa Ciidanimo.
Agaasimaha Nabadsugidda iyo Sirdoonka Qaranka, C/laahi Sambaloolshe oo ay ahayd in Taliskiisu uu ogaado Xogta iyo Xuuraanka ku saabsan Qaraxyadda intaysan dhicin ka hor ayeeysan saamaynayn Xil ka qaadistiisan. Waxayna Khuburadda Amnigu aaminsan yihiin inay tahay tani tallaabo aan loo qaadin dhinacii saxda ahayd. waayo cidda ay ahayd in loo ciqaabo wixii dhacay waa Agaasimaha NISA.
Gen Bashiir Maxamad Jaamac waxa uu soo qabtay Xilal kala duwan oo Ciidan oo ay ka mid yihiin Taliyaha NISA, Taliyaha Ciidanka Asluubta, iyo Taliye Ku Xigeenka Booliska Soomaliyeed.